Toxemia ngesikhathi sokukhulelwa bungaphazamisa a imizwa ekuseni kakhulu ojabulisayo eside elindelwe emapheshana ezimbili. Kwenzeka ngenxa ukushintsha kwama-hormone, amasosha omzimba bese semithambo emzimbeni ngenxa ukuthuthukiswa kwe-esibelethweni. Ukungakhululeki ngokuvamile eduze kokuphela 16 amasonto.
Kungani ekuseni ukugula kubantu besifazane abakhulelwe kwenzeka kusaqalwa?
Odokotela Namanje siphikisana ngalolu daba: abanye abesifazane, lokhu kungenzeki, kuyilapho abanye bengase bahlushwe cishe kwezinyanga ezingu. A indima juqu namanje eyadlalwa isimiso sezinzwa, okuyinto ngesikhathi sokukhulelwa kunomphumela ethize isisu namathumbu. Kube ukuhlanza, isicanucanu, amathe anda.
Kwaba khona odokotela abangaphezu waphawula ukuthi toxemia ngesikhathi sokukhulelwa iqala lapho Ukukhetha of human chorionic gonadotropin (main "ukukhulelwa-hormone okuthiwa i") ifinyelela isiqongo sayo.
Uma ekuqaleni umama okhulelwe unezinkinga esiswini noma emathunjini, ingozi ubuthi inyuka kakhulu.
Toxemia yokukhulelwa namanje kubhekwa isimo sokugembula, ngoba ezingapheli zingayilimaza umbungu. Ngesimo ezinzima, lokho kungase kubangele yokuntuleka mpilo nezakhi sokuthuthukiswa ingane kuze kube ukukhipha izisu.
Yiziphi izimpawu ubuthi?
izimpawu Main: isicanucanu, ukuhlanza, amathe ngokweqile (ptyalism), ushintsho ukunambitheka, ukungabekezelelani ukuba iphunga elithile. Zonke lezi zenzakalo kungenzeka, bengabantu ngabanye nanjengeqembu. Ngaphansi ezivamile ekuseni ukugula uma owesifazane okhulelwe obonakala njengenhlangano sokuwa Izilonda (dermatitis), ukuthambisa amathambo (osteomalacia), isifuba somoya kanye jaundice.
Ukuhlanza - lomkhuba ezivamile, esizibonakalisa isigamu ucishe of kwabesifazane abakhulelwe. Kodwa le ndlela yokwelapha kuyadingeka kuphela zonke okweshumi kwakho kubo. Uma izikhathi eziningana ukuhlanza usuku kwenzeka - esiswini esingenalutho ekuseni noma ngemva kokudla, iphunga ajwayelekile kubangele ukuphendula singenele, ngokuvamile iqala lapho ezizwa esegula - kuba izimpawu evamile, okuyinto asidingi kokungenela wezokwelapha.
Ngokuvamile, lezi zenzakalo of ubuthi okuyokwenzeka ngemva kwesonto yesihlanu yokukhulelwa, futhi ukhathazeke ngoba engalandeli. Sikamama okhulelwe ngaphezulu ihlangabezana, le toxicosis evelele ke ungathola.
Yini toxicosis kuyingozi ngoba impilo kamama nengane?
Toxemia ngesikhathi ukhulelwe amazinga amathathu zaba namandla kakhulu.
Ngemva kokudla noma ekuseni is ukuhlanza, kodwa izikhathi akukho kuka 4-6 ngosuku. Kukhona ukwehla esesuthi, kodwa isimo jikelele zomzimba akusho ahlupheke. Kwangathi kuwela ngaphakathi komqondo Isisindo 3 kg.
Ukuze bagweme ukubanjwa sincoma ezintathu izinhlobo izidakamizwa:
- ukunciphisa excitability kwemizwa;
- normalizes umzimba.
Ukuhlanza izikhathi 10 ngosuku, isimo jikelele sibhebhetheka, kwenhliziyo ukukhuphuka 90-93 amabhithi ngeminithi, izinga lokushisa likhuphuka ukuze 37-37,5 degrees. Umonakalo obangelwa isilinganiso ubuthi waphawula ngisho noma ukuhlanza cishe akusho aphazamise, kodwa kukhona othile isicanucanu njalo, ngenxa ayithatha owesifazane siyayeka ukudla ngokuphelele.
Leli cala isivele zidinga esibhedlela noma yokwelapha e esibhedlela ngosuku. Beka weThrojani, ukwenza i-bikho kwezakhi nasoketshezini. Uma lo mkhuba toxemia iqhubeka, Udokotela angase anikeze isiguli imithi ezicindezela nesifiso sokufuna ukuba ahlanze.
Lena kakade inkomba esibhedlela ngokushesha. ukuhlanza unomphela, lapho umzimba alamukeli ngisho amanzi, abalulekile ukuphazamiseka umzimba, ukuntuleka kwamanzi emzimbeni, ukuwohloka okunzima isimo jikelele, acetone e umchamo, izinguquko igazi Ukwakheka - ke esayina of ubuthi ezinzima.
Yabela ngokuvamile ukwelashwa, efana kobukhulu isilinganiso. Kodwa uma ngcono ingekho ke kungase kuholele ukukhipha izisu ngenxa yezizathu zokwelapha. Ngenhlanhla, kwenzeka kakhulu kuyaqabukela.
Kunoma ikuphi, toxemia - ezinhle yimuphi owesifazane, ngoba kusho ukuthi usana lukhula nokuthuthukisa. Ukuze injabulo wokuba umama, zonke lezi izinkathazo bungakhuthazelelwa. Ngaphezu kwalokho, uma isimo sengqondo okufanele ukungakhululeki yesikhashana, ungakhathazeki, Tune kuya okuhle, ukugula ekuseni uya ngokushesha ngaphandle kokushiya izinkumbulo ezimbi.
Ihhotela "eGcekeni Podznoeva" Pskov izithombe kanye nokubuyekeza